ဝယ်ကျဦးမလား red link | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ၀ယ်ကျဦးမလား red link
၀ယ်ကျဦးမလား red link
Posted by chityimhtoo on Jun 23, 2012 in News | 16 comments
ကဲမိုးရာသီအထူးဈေးရောင်းပွဲတော် တဲ့ ….
495,000 ပါကျွန်တော်တို့လို ပြည်သူအချဉ်လေးတွေဝယ်ကျပါဦး။
တစ်နေ့ကို ၁၀ကြိမ်လောက် restart ချရပါတယ်။
ကွန်ပလိမ်းတက်တဲ့အခါမှာ MPT ကကျတာပါ ရတနာပုံကကျတာပါဆိုပြီးစောက်မြင်ကတ်လောက်အောင်ပြန်ဖြေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ယူထားတာ ရတနာပုံလည်းမဟုတ်ဘူး MPT လည်းမဟုတ်ဘူး red link ဆီက၀ယ်ထားတာပါ။
ဒီလိုတာဝန်မယူနိုင်ရင် ဘာလို့ ရောင်းနေရတာလဲ။
အရောင်းခန်းမမှာ လာဝယ်တဲ့လူတွေ ကို ရတနာပုံ၊ MPT နဲ့red link တို့ ရဲ့
အားနည်းချက်တွေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှင်းပြသင့်တယ်။ ကျေနပ်မှဝယ်ပေါ့။
ခပ်တည်တည်နဲ့ဒီအတိုင်းဆက်ရောင်းနေရင်
ဝယ်တဲ့လူတွေတော့ chityimhtoo လို အတွယ်ခံရမှာပဲ။
“တွယ်လို့ ” ရလို့ ကတော့ “ဆက်တွယ်ရေး” ကတော့ “ဆက်တွယ်” အုံးမှာဘဲ။
ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်မတို့ဆီမှာလိုင်းကျတော့ ဖုန်းဆက်တယ်။ သူကအကြံပေးတယ်။ ခဏပိတ်ထားပါတဲ့။ အင်တာ နက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာကို ခဏပိတ်ထားပြီးမှပြန်ဖွင့်ပါဆိုတော့တညှိးကြီးပဲ။ သို့သော်မပိတ်ရင် လိုင်းကမတက် လို့ ညနေပိုင်းနဲနဲ လူကြဲသွားရင် Network Game ပဲဆော့ပါဆိုပြီး တနာရီလောက်ပိတ်ထားရတာပဲ။ အဲဒါမှပဲ ညပိုင်းလူစည်ချိန်မှာ လိုင်းမကျတော့တာ။ အဲဒါ Red Link ပါ။ လိုင်းဆွဲအားကောင်းတယ်ဆိုလို့ diamond ၀ယ်ထားလဲ ကျချိန်တန်တော့လဲ အများနည်းတူပါပဲ။ ကျတာပါပဲ။ ပိတ်ထားမှပြန်တက်ပါတယ်။ အဲဒါ ကိုယ် တွေ့ပါ။
ကျွန်တော်တို. FTTX ကတော.ရှင်းတယ်၊ ပိုက်ဆံ (၈) သိန်းကျော်ပေးပြီး ဘာသတင်းမှကို မကြားတော.ဘူး။ ကြာပါပြီ။ မေးလဲ တိတိကျကျ မသိရပါဘူးဗျာ။
RedLink က outdoor Wimax လိုင်းတွေလဲ အတူတူပါပဲ
ပေးဆောင်ရတဲ့ Bill ဈေးနှုန်း ကလဲ တစ်ခြားMPTရဲ့ GSM အင်တာနက်၊Fiberအင်တာနက်၊
ADSLအင်တာနက် လိုင်းတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ဈေးများနေပါတယ်…
လိုင်းမကောင်းလို့ ဖုန်းဆက်ရင်လဲ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို နဲ့ တာဝန်ယူ ခြင်း မရှိပါဘူး…
အင်တာနက်မှာ အဓိက ရတနာပုံတယ်လီပို့ ရယ် mpt ရယ်ပါ .. red link, wimax, ဆိုတာတွေက လိုင်းဖမ်းတဲ့ ပစ္စည်း ရောင်းစားတာပါ .. သူတို့ လိုင်းဖမ်းတဲ့ ပစ္စည်းက သူများထက် မြန်မြန် ဖမ်းနိုင်တယ် ..လိုင်း ပိုကောင်းတယ် နေရာမရွေး ဖမ်းနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ကြော်ငြာရောင်းရမှာပါ .. ဒါပေမယ့် မလိမ့်တပတ် သူတို့ ကပဲ အင်တာနက် ထောင်ထားသလိုလို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ကုန်ကြလို့ အခုလို ဖြစ်နေကြတာပါ ..
တကယ်ပဲ ရတနာပုံ နဲ့ mpt က လိုင်းကျပ်တဲ့အခါ သူတို့ရော အားလုံးပါ လိုင်းကျသွားတတ်ပါတယ် .. သူတို့ဖက်က ရှေ့နေလိုက်ပေးတာ မဟုတ်ဘူးနော် .. အခု ရုံးမှာ wimax ရော ရတနာပုံ adsl ရော တပ်ထားတယ် .. အားလုံး လိုင်းကျပ်ရင် အတူတူပါပဲ
ထပ်ထပ်ပြီးရောင်းတာတော့ စောက်ရှက် မဲ့လွန်းတာပေါ့။
တားတားတို့ကတော့ စီတီအမ်အေ ၈၀၀ နဲ့သုံးတယ်
အဲဒီဆက်သွယ်ရေးကလူတွေ ကောင်းကိုမကောင်းတာ ကမ်ပနီတွေဆိုပိုဆိုးသေး ဟိုလူ့ပိုင်တယ် ဒီလူ့ကိုင် ထားတယ်နဲ့ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေကြတာ
ရှိတာလေးလျှော့ပေါ့၊ပိုရောင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေက
ကျွန်မလဲ redlink သုံးတယ် .. တစ်ခါတစ်လေ တော်တော်မြန်ပြီး တစ်ခါတစ်လေ တော်တော်လိုင်းကျပါတယ် …
johnphyo paing says:
လိုင်းကျရင် ပြန်ကောက်တင်လေ ….ဟီဟီ
သုံးမလားလို့ စဉ်းစားနေတာ အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ ရဲ့ recommand တွေကြည့်ပြီး တော်တော်အားရသွားပါပြီခညာ